युरो कपः उपाधिका लागि आज इटली र इङ्ल्याण्ड भिडर्दै, कस्को पल्ला भारी ?| Corporate Nepal
युरो कपः उपाधिका लागि आज इटली र इङ्ल्याण्ड भिडर्दै, कस्को पल्ला भारी ?
असार २७, २०७८ आइतबार १८:३६
काठमाडौं । युरो कप २०२० उपाधिका लागि आइतबार राति फाइनल खेल हुँदैछ । उपाधिका दुई दाबेदारमा इटली र इङ्ल्याण्ड रहेका छन् । फिफा वरियतामा चौंथो नम्बरमा रहेको इङ्ल्याण्ड र सातौं बरियतामा रहेको इटली दुवै सशक्त टिम हुन् । इटली चार पटकको विश्व विजेता हो भने इङ्ल्याण्ड एक पटकको ।
यस पटकको युरो कप यात्रामा अपराजित रहेको इटली र आक्रामक खेल्दै आएको इङ्ल्याण्डबीचको खेलको नजिता कस्तो पक्षमा जाला ? भनिहाल्नसक्ने अवस्था देखिन्न । लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा उपाधि हात पार्न नसकेको इङ्ल्याण्ड र फुटबलमा निकै क्रेज राख्ने इटलीबीचको आजको खेल निकै रोचक हुने देखिएको छ ।
सशक्त टिमसहित आक्रामक खेल्ने इङ्ल्याण्डका खेलाडीलाई रोक्ने इटलीको रक्षापंक्तीलाई निकै मुस्किल पर्नसक्छ । यस पटक इटलीले यसअघिका प्रतियोगितामा भन्दा केही बढि आक्रामक खेले पनि बढि सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण खेलेकोले इङ्ल्याण्डलाई इटली भारी पर्नसक्ने कतिपयको अडकल देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलहरूमा हलचल ल्याउँदै आएको दुवै बलिया टिमले आजको फाइनल खेलमा कस्तो रणनीति अपनाउलान ? खेल हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रशिक्षित इटाली बलियोले इटालीलाई यसपटक निकै परिस्कृत टिम वर्कमा खेल्ने बनाएका छन् । यता पहिलो पटक युरोकप फाइनलमा पुगेको इङ्ल्याण्ड सन् २०१८ को विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको टिम हो । विश्वकै लोकप्रिय र बढि लगानी भएको फुटबल प्रतियोगिता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग खेल्ने खेलाडीहरू नै खेल्ने भएकाले पनि आजको युरोकपको फाइनल खेल सानदार नै हुने र करोडौं मानिसले प्रत्यक्षरुपमा हेर्नेछन् ।
पाकिस्तानका शाहिद अफ्रिदी ईपीएल खेल्न नेपाल आउने
टोकियो ओलम्पिकः तीन स्वर्णसहित चीन शीर्ष स्थानमा
नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गर्ने सबै खेल डिशहोमको एक्सन स्पोर्टसले प्रशारण गर्ने
असार २७, २०७८ सोमबार
टाइब्रेकरमा इङ्ग्ल्याण्डलाई हराउँदै युरोकप २०२० को उपाधि इटलीले जित्यो
ब्राजिललाई उस्कै घरेलु मैदानमा हराउँदै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका २०२१ को बिजेता